Intombazana ethandekayo yeCanoe-Gate ixelela konke! - Iphepha Lasekhaya
Eyona Iphepha Lasekhaya Intombazana ethandekayo yeCanoe-Gate ixelela konke!
Intombazana ethandekayo yeCanoe-Gate ixelela konke!
Kwindawo eyayinokuba licandelo elinemifanekiso emihle, UNkosazana Kosinski wayexela bukhoma malunga nezikhukula e-Wayne, N.J., ngephenyane elalidada kumazantsi edolophu.
Iintsuku ezisibhozo zemvula, kwaye ezinye iindawo azisajongi njengeendawo zokuhlala, uxelele Namhlanje ababukeli phezulu kwiyure yesi-7. Imilambo emincinci enemisinga yayo eyomeleleyo ithabathe izitalato, kwaye abantu bayaphuma, nangayiphi na indlela abanokuthi ngayo.
Kwaye ngewusebenze, nawo-umfanekiso wobugcisa wombhaleli u-Huck Finn-edlula kwisahlulo se-Jersey-wayenabafana ababini kwi-hip-waders abangakhange badlule kwimizuzu kamva, nge-7: 02 am, ngokungathi balindile . Amanzi ajikeleza emaqatheni abo. UNks. Kosinski wayejongeka njengomfazi okhulileyo onxibe iimpahla ezintle ebhexa indlela yakhe ejikeleza iphuli yabantwana.
Xa isenzeka, yayihlekisa kwaye ihlazisa, kwaye ndacinga nje, 'Kulungile, oku kubonakala ngathi kubi kancinci, okanye kubonakala kuyinto engaqhelekanga, kubantu ababukeleyo,' UNks. Kosinski uxelele Umjongi kwiintsuku ezine emva kokuba icandelo lisasazwe.
Ngeli xesha, ikliphu yayisele ijikeleze i-imeyile phambili kunye nakwimiboniso yeendaba zekhebula.
Ngaloo mva kwemini, uDon Imus wahamba waya kwi-gaffe. UTucker Carlson wayichola kamva, nangoMgqibelo iinginginya ze Fox kunye nabahlobo baxoxa ngento ababeyibiza ngokuba yi-Flood Faux Pas.
Ukuba iphenyane likaMichelle Kosinski liye lavuza ukuvuza kwi-NBC 'Namhlanje' bonisa uLwesihlanu, i-Associated Press igxothwe, wayengenangxaki kakhulu.
NgoMvulo, Umboniso wemihla ngemihla U-Jon Stewart wayenendlela yakhe:
Knock, knock, utshilo, emva kokubonisa ikliphu.
Canoe bakholelwa ukuba benza oku kumabonwakude?
UNks Kosinski uthatha umtya. Intatheli enamava enezidanga ze-bachelor's kunye neyesidanga se-Northwestern University eMedill School of Journalism, waqala umsebenzi wakhe kumabonakude e-WIFR e-Rockford, e-Ill., Kwaye ngo-2001 wavotelwa njengeyona ntatheli igqwesileyo eCharlotte yimagazini yezobugcisa kunye nokuzonwabisa yesixeko ngendlela yakhe ethe ngqo .
Waba ngumbhaleli kuzwelonke kwiinyanga ezininzi ezidlulileyo emva kokusebenza iminyaka emine kumanyano lwe-NBC eMiami.
Kodwa intshinga yakhe yokuqala yokuqwalaselwa kukazwelonke yayingeyiyo yonke into elungileyo, nokuba. Yena kunye nabasebenzi bekhamera ye-NBC bafumana ukhenketho lwe-impromptu lokurhanelwa isisele saseHolloway uJoran van der Sloot wesisele sikajele ngo-Agasti. Ngexesha lokhenketho, ngequbuliso wabaleka waya kuMnumzana van der Sloot, awenza naye udliwanondlebe olufutshane.
Watyholwa kamva ngabagxeki abambalwa besihlalo esitulweni sokungena entolongweni, kwaye igqwetha lika Mnu. Van der Sloot ngempumelelo wamangalela i-NBC ekubhengezeni le mifanekiso ngenxa yokuba icandelo linyhasha ilungelo lakhe labucala, nangona wayevumile udliwanondlebe.
UNks Kosinski uthe umlawuli weentolongo wase-Aruba uFred Maduro wanika uNkosazana Kosinski kunye neqela lakhe udliwanondlebe.
Kuzo zombini iimeko, bekufana, UNks Kosinski uthe. Abantu babecinga ukuba yenye into, kanti phofu yayiyenye into. Akuzange kubekho naziphi na iinzame nakweyiphi na imeko zokwenza nantoni na engaphantsi.
U-Savvier ngoku ngenxa yokulwa kwakhe kwangaphambili nabagxeki, UNks Kosinski uthe akazange amangaliswe yimpendulo kwiCanoegate, kuphela ngamandla ayo.
Yinto ebuhlungu, utshilo, kuba ufuna ukuzichaza. Elona nqaku libalulekileyo kum lokuba ndiwele yile: Ewe, ibijongeka ngathi ibubudenge ngokwenene, kodwa akuzange kubekho mzamo wokuyenza ibonakale ngathi sisiphango esibi ngakumbi kunokuba sasinjalo.
Apha, kumdla wokucoca umoya, yinto eyenzekileyo:
Ngomhla wesibhozo othe ngqo wemvula kunxweme olusempuma, kunye nkss Kosinski ngentsasa yesithathu yokunika ingxelo Namhlanje Ukusuka eBergen County, wayekummandla waseWayne owawuzaliswe ngamanzi xa uMlambo iPassaic okufuphi wawuphuphuma unxweme lwawo.
Ngeentsuku zoku-1 kunye no-2, umfana oneminyaka engama-31 ubudala waseCinnaminson, NJ, wayenxibe i-hip-waders kwaye wakhupha iingxelo ezimnandi malunga nabemi abalungileyo abaleka amakhaya abo aphekiweyo, malunga neenzame zokuhlangula eziqhubekayo.
Kodwa nawuphi na umvelisi weendaba zosasazo uyakukuxelela ukuba inkanuko yoluntu kwezi ntsuku yokuxela ukufa kwemo yezulu yeyona yomeleleyo ukusukela ngala mhla uDan Kunoko wabambelela epalini ngexesha leNkanyamba uCarla ngo-1961; yomelele, ngamanye amagama, njengoko kuhleli kunjalo.
Simbonile uShepard Smith weFox ukuba abethwe okomntwana omkhulu xa kuvuthuza imimoya enamandla. Simbonile uAnderson Cooper kwi-CNN yakhe ebomvu yophula umoya ejikeleza iGulf Coast njengekayiti. Sijonge uGeraldo Rivera egudla okanye angabancami abasebenzi bokuhlangula endleleni, kwaye uTed Koppel cajole ungummi osele ekhulile otyebileyo ukuba amshiye ekhayeni lakhe elingaqhelekanga laseNew Orleans. Sibonile ingqumbo, imfesane, ukhuphiswano, ugqithiso, indlala, isicaphucaphu, ubundlobongela kunye nokomelela okungathethekiyo komoya womntu. Yintoni enokushiyeka?
Asikhange sibonile iphedi yokubhalela ehamba ngeesentimitha ezimbalwa zamanzi amileyo kwinto enamarhe okuba sisikhephe esiyi- $ 1,500.
Le, ikwimo emsulwa ngakumbi, ngumbono oqaqambe ngefayile ye- Namhlanje bonisa ingqondo yomvelisi ngoLwesine ebusuku. Izitalato zazizele ngamanzi. Abahlali kunye nabasebenzi bokuhlangula babekhwele ngeenqanawa. Yayivakala ngokugqibeleleyo.
Bathenga isikhephe baza bahambisa ngentsasa elandelayo. UNks. Kosinski wafika kwangoko ukuze aziqhelanise nokuhamba ngeenqanawa. Wayekhe wakhwela iphenyane ngaphambili, watsho, kodwa akazange azenzele yedwa, kwaye akaze angene emanzini nakuphi na ukungxola kunomsinga ohamba kancinci. Bazama ukuseta umpu kwindawo enqamlezileyo apho amanzi ayephakame esinqeni kwaye umsinga womelele, kodwa abakwazanga ukuwukhanyisa, utshilo uNkosazana Kosinski. Imakrofoni yayingenazingcingo kwaye yayingasebenzi, kwaye ngezixhobo zonke, azinakungena emanzini anzulu.
Ke abavelisi bacele uNks. Kosinski ukuba abhexe apho amanzi angekho nzulu khona. Wenza. Wayengonwabanga ngayo. Kodwa uye wenza.
Nangona bendifuna ukubonisa amanzi anzulu, ekugqibeleni ndathi O.K. Khange ndicinge ukuba ayifanelekanga, utshilo.
Ngaphezulu kweyure yesi-7, uMat Lauer wazisa ingxelo:
… Kodwa kuqala, izikhukula ezinkulu apha eMntla mpuma, nanjengoko imvula ithe gqolo ukuna nanamhlanje. UMichelle Kosinski we-NBC-ndiyaqikelela, ukwinqanawa….
Mfana, yayinguye! Ukusuka esiswini sobugcisa bobuchwephesha, UNks. Kosinski uhambise ingxelo apho achaze khona imizamo yokufuduka kwaye wakhankanya ukuba kukho amanzi anzulu, aqaqambeyo kufutshane. Kanye njengokuba wayeyikhaba ebuyela kuKatie Couric, la madoda mabini aqaqambisa indlela yawo kwisakhelo.
UMnu. Lauer wakhathazeka. Ngaba lukhona uhlobo oluthile lokulahla ngokuqatha apho phakathi komphambili esiye-sibuyele umva, utshilo. Sababona aba bantu ngomzuzwana odlulileyo, uMichelle, ehamba-ingaba la madoda angcwele ahamba phezu kwamanzi? Kuqhubeka ntoni apha?
UNks Kosinski, othe ngenyanga ephelileyo wabizwa njengentatheli eshushu kulo nyaka Amatye agiqekayo Uluhlu olushushu olushushu lonyaka, oluphuculweyo. Kutheni uhamba, utshilo, xa unokukhwela?
Ngaba isikhephe sakho sibetha emhlabeni, Michelle? Ucele uNks. Couric, akukho namnye oza kuphoswa leli thuba lihle kangaka.
Ewe akunjalo, uNksk. Kosinski waphendula. Igudile njengesilika.
Ucacisile ukuba abavelisi abayi kumvumela ukuba asasaze kumanzi anzulu kuba umsinga unamandla kakhulu - ingqiqo eya kuthi ibonakalise ukuba ayaziwa kwaphela xa, ngesahluko ngeyure yesibhozo, bamvumela ukuba asasaze emanzini anzulu yangoku yamtshayela yabonakala. (Kum, utshilo Umboniso wemihla ngemihla Mnu. Stewart ngoMvulo, umthetho wokuqala wokugubungela uqhwithela awuzange ubhenqwe ngaphandle kwesakhelo.)
Ekuqwalaseleni emva, UNks Kosinski uthe, Ndinqwenela ukuba bendenze izinto ngokwahlukileyo. Ndinqwenela ukuba bendithethile kanye ebhetini, kucace gca, 'Katie, Matt, sikunyawo lwamanzi apha, kodwa ngaphandle kunqanqathele esinqeni kwaye umsinga womelele.'
Ukugculelwa kwababuki zindwendwe kwakuhlekisa, utshilo. Wonke umntu uqhula? Kuyadinisa kancinci, kodwa kulindeleke. Njengaye nabani na onamandla, ndicinga ukuba kufanelekile kwaye sifuna ukuphononongwa, utshilo uNkosazana Kosinski. Kodwa ndicinga ukuba ngamanye amaxesha phaya phandle, kukho imvakalelo yokufuna ukubona okungalunganga ngaphezu kokulungileyo kunye nobungozi.
Inkxalabo yakhe enye: Inokuba ijonge kubantu abathile ngathi besizama ukubeka into kubabukeli, utshilo.
Oko kunokuba bubudenge.
Iikhathuni zipholile kwakhona ngenxa ye-Instagram
Ukufuna uMhlobo weSiphelo seLizwe kuzisa iKhemistri engalindelekanga phakathi kukaCarell noKnightley
UAdam Driver weAlfa-Male Histrionics Phantse ucime uMnqweno kwi 'Burn This'
eyona nkqubo ibalaseleyo yokubuyisela umva
uyakwazi ukusebenza kwiiyure ezi-4 zokulala
iipilisi zokunyusa imetabolism
Ii-albhamu zejazz ezilungileyo zika-2015
Ukusebenza kwebhulorho yexesha leentlola
ngubani le nombolo yeyasimahla